काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली विप्लव नेतृत्वको समूह र पूर्वराजासमर्थक प्रति आक्रामक बनेका छन् । आइतबार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हालै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गरेरै छाड्ने दाबी गरे । पूर्वराजासमर्थकतर्फ लक्षित गर्दै उनले केही व्यक्तिले अझै रैतान हुने चाहना राखेको टिप्पणी पनि गरे ।
द्वापर युगमा कृष्णले समेत धेरै सम्झाउने र सम्झाउँदा नमान्नेलाई ठेगान लगाउन हातमा चक्र लिएर हिँड्ने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘विध्वंश गर्नेलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्न राज्य अघि बढ्यो । ब्याक गियर छैन । हातहतियार बुझाउन समय दिइएको छ । हातहतियार नबुझाए कसरी लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ ।’ सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत विप्लव समूह वार्तामा आउन नमानेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भवाना नभएको बताए । ‘कोही अहिले पनि फालिएको राजतन्त्रको पक्षमा जनमतसंग्रहको कुरा गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक भन्ने व्यक्तिहरू नै जोगीले फेरी लगाएजसरी हिँडिरहेका छन्,’ ओलीले भने, ‘राजतन्त्र भनेर धेरै फट्याकफुटुक नगर्न जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु ।’
उनले निरंकुशतन्त्र माग्नेले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भन्दा सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको तर्क गरे । ‘अहिले सचेत विश्वविद्यालय पढेका केही मान्छेहरू नागरिक भएकामा गर्व गर्न नसक्ने, रैतान हुने इच्छा गर्छन् । जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका पाखण्डी सिद्धान्तका पछाडि,’ उनले भने, ‘नेपालमा प्रतिगमनको कुनै सम्भावना छैन । नेपाली जनता सुन्न पनि तयार छैनन् । नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो । भीक्षा पाएर ल्याएको होइन ।’
‘विखण्डनको मुद्दा छोडेर राष्ट्रिय गान बजाएर कार्यक्रम सुरु गर्न थाले’
प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र मधेस अभियानबाट रूपान्तरित भएर मूलधारको राजनीतिमा आएका सिके राउतको नाम उच्चारण नगरी विगतमा छुट्टै राष्ट्रिय झन्डा, छुट्टै राष्ट्रिय गान बनाएर मुलुक विखण्डन गर्न लाग्नेहरू अहिले राष्ट्रिय गान बजाएर आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्ने पक्षमा आएको बताएका छन् । ‘देशमा रहेको पृथक्तावादी विचार, संगठन, गतिविधि अन्त्य भएको छ । अब देशमा विखण्डनवादी संगठन छैनन्,’ ओलीले भने, ‘खुसी हुनुपर्नेमा केही साथी आत्तिएका छन् । कुनै आग्रहको कुरा नगरी खुसियाली मनाऔँ ।’
‘सरकारको काम उपलब्धिपूर्ण’
सरकारले एक वर्षको अवधिमा आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको र यो नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको दाबी ओली गरे । कृषिमा नौ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको र मकैमा मात्र ६ प्रतिशत उत्पादन बढेको उनले बताए । ‘यसपालि पानी परेर नौ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भयो भन्नेहरू छन्, अर्को वर्ष योभन्दा बढी उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पानी पोहोर पनि परेको थियो । अर्को वर्ष पनि पर्छ,’ ओलीले भने । फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार हुन नदिने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दृढता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रश्नदेखि भागिरहेका छन् : कांग्रेस उपनेता गच्छदार
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले शान्ति–सुरक्षामा सरकार कमजोर रहेको बताए । निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसक्नु, एक वर्षको अवधिमा भएका हत्या, बलात्कारलगायत घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्न नसक्नुले पनि सरकार कमजोर रहेको पुष्टि हुने दाबी गच्छदारले गरे ।
सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरिरहेको र यस्तो कार्य कांग्रेसलाई सह्य नहुने उनको भनाइ थियो । ‘संसद्मा प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भाग्नुहुन्छ । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी भएन,’ उनले भने । सिके राउतसँग सरकारले सुटुक्क वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याएको, तर विप्लवको सम्बन्धमा भने ठूलो स्वर गर्नु ठीक नहुने गच्छदारको तर्क थियो । ‘विप्लवलाई समेत वार्तामा ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत भएकाले फिर्ता लिन उनले सुझाब दिए । गच्छदारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकसमेत फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
ठाकुरको प्रश्न– राज्यमा आतंक छ, अधिकार माग्दा जेल जानुपर्ने ?
राजपाका नेता महन्थ ठाकुरले राज्यमा अहिले पनि आतंक रहेको र जनताले अधिकार माग्दा जेल जानुपर्ने स्थिति रहेको बताए । टीकापुर मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीतर्फ इंगित गर्दै ठाकुरले शक्तिको एकाधिकार रहेको बताए । ‘कानुन त बनिरहेकै छन्, तर केन्द्रीकृत कानुन बनिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा अधिकार माग्दा जन्मकैदको सजाय भोग्नुपर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘लोकतन्त्रमा नमागे जनताले अधिकार कहिले माग्ने ? सरकारले आतंक मच्चाउँदा इमान पाउने, जनताले आन्दोलन गर्दा जेल जानुपर्ने ?’
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्यमा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारको एक वर्ष अन्योलमा बितेको आरोप लगाए ।
टुंगियो संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । ११ पुस ०७५ बाट प्रारम्भ भएको यो अधिवेशन ८९ दिन चल्यो । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा विधेयक दर्ता गरियो । जसमध्ये ८ वटा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । ७ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् भने जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भूउपयोग विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए ।
६ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् । संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभामा बाँकी रहेका ७ मध्ये ४ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको र २ विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । राहदानी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा प्राप्त भएका ८ मध्ये ४ वटा विधेयक पारित भइसकेको र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको सभामुख महराले बताए । त्यसबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ ।
संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयक तेस्रो अधिवेशनबाट स्वीकृत भयो । त्यसबाहेक सांसदहरूले दर्ता गराएका सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव तथा संकल्प प्रस्तावमाथि पनि यो अधिवेशनमा छलफल भयो । यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट १८ वटा विधेयक पारित भएको छ । जसमा ७ वटा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र अन्य भने प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका विधेयक रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बताए ।
हतियार नबुझाए कसरी लिने सरकारलाई थाहा छ
चुनाव हुन दिन्नँ भन्ने, निर्दोष मान्छे मार्ने, चन्दाका नाममा लुटपाट गर्ने गरिएको छ । विध्वंश गर्नेलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्न राज्य अघि बढ्यो । ब्याक गियर छैन । हातहतियार बुझाउन समय दिइएको छ । हातहतियार नबुझाए कसरी लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ ।
रगत बगाएर गणतन्त्र ल्याएको हो, भिक्षा मागेर होइन, राजतन्त्र भनेर फट्याकफुटुक नगर्नुस्
कोही–कोही अहिले पनि फालिएको राजतन्त्रको पक्षमा जनमतसंग्रहको कुरा गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक भन्ने व्यक्तिहरू नै जोगीले फेरी लगाएजसरी हिँडिरहेका छन् । राजतन्त्र भनेर धेरै फट्याकफुटुक नगर्न जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु । नेपालमा प्रतिगमनको कुनै सम्भावना छैन । नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्र हो । भिक्षा पाएर ल्याएको होइन । (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
२०७५ चैत ११ सोमबार ०६:४८:०० मा प्रकाशित